MCSAသင်တန်း in MZ Edu — MYSTERY ZILLION
MCSAသင်တန်း in MZ Edu
November 2008 edited November 2008 in Project
MZ Edu မှာ MCSA ကို သင်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေရှိရင် ... လုပ်ပေးကြပါဦး ....
ကျနော်တို့လို ... နယ်မြို.သေးသေးလေးကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက် online education only ပဲ အားကိုးရာရှိတယ်ခင်ဗျ။
MCSA ကို အခြေခံ basic knowledge ( eg. how many subject to learn for MCSA, etc. ) က စပြီး ပေးနိုင်ရင် အရမ်းကောင်းမယ်။
ဆရာသမားတို့ စဉ်းစားလို့ ကူညီပေးကြပါလို့ ။ ။ :77:
MCSA နဲ့တော့ မဆိုင်ပါဘူး။ ဒါနဲ့ Edu က နည်းနည်း ငြိမ်သွားသလားလို့။ ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာပါလိမ့်။ အသံလည်း သိမ်မကြားရတော့ဘူး။
ရှိပါတယ် edu.mysteryzillion.org ကတော့ သူူဟာနဲ့ သူ run နေပါတယ်ခင်ဗျ (အက်ဒမင်နှင့် မော်မော် အစားဝင်ဖောလိုက်တာ)
That right man !:30:
I agree with you . :63:
သူဟာသူတော့ Run တာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ နဂိုလို Dynamic မဖြစ်၊ သိပ် active မဖြစ်လို့ပါ။
ဆရာတွေလည်း မအားတော့ဘူးထင်တယ်။ ကျောင်းသားတွေကော ကျောင်းခေါ်ချိန်မှန်ရဲ့လားမသိ။
နောက် User Friendly မဖြစ်တာ။ edu သုံးထားတဲ့ moodle က User Friendly မဖြစ်ဘူးလို့ မြင်ပါတယ်။
အခုတော့ edu သည် အီပဲ့ အီပဲ့ဖြင့်သာ ခရီးဆက်နေပါသည်။ :2:
~~~ ကျနော်တို့လဲ တာ၀န်ရှိပါသည် ... ၀ိုင်း၀န်းကာကူညီ ~~~
~~~ ကျမတို့လဲ တာ၀န်ရှိပါသည် ... ၀ိုင်း၀န်းကာကူညီ ~~~ :P
~~~ MysteryZillion ကို စုပေါင်း ကူညီပါမည် ~~~ \_:D/
တကယ်ကူညီဖို့လိုသလို ... ကူလဲကူညီနေကြပါတယ် ..... :5:
Ko Alexander က NGO ကနေ ရဲတပ်ဖွဲ့ထဲ ရောက်သွားပြီလား။ MZ ထဲမှာတော့ Networking ကျွမ်းကျင်တာ မဖြူပန်းခက်တယောက်ပဲရှိလားလို့ (ကျနော်တွေ့တာ ပြောတာနော် ရှိခဲ့ရင်စိတ်မဆိုးကြေးနော်:67:)။ ပြီး MCSAက online ကသင်ဖို့သိပ်မလွယ်ဘူးထင်တယ်နော်။ သူက စက်ပစ္စည်းတွေလိုတယ်မဟုတ်လား။ ကျနော်တောင် Networking စိတ်ဝင်စားပေမဲ့ ဘန်းကျော်မှာ စက်ပစ္စည်းရှားလို့ software လိုင်းဘက်ရောက်သွားတာ။
Ko Alexander က NGO ကနေ ရဲတပ်ဖွဲ့ထဲ ရောက်သွားပြီလား။ MZ ထဲမှာတော့ Networking ကျွမ်းကျင်တာ မဖြူပန်းခက်တယောက်ပဲရှိလားလို့ (ကျနော်တွေ့တာ ပြောတာနော် ရှိခဲ့ရင်စိတ်မဆိုးကြေးနော်:67:)။
Istein ကတော့ ဒီဘူတာပဲဆိုက်တော့တာပဲ ... :P
Alexander လဲ နောက်တစ်ဘူတာဆိုက်ကြည့်လိုက် ဦးမယ်။ " EiEiygn " ရှိသေးတယ်လေ။
^ ကဲ ... တခြားဘယ်သူတွေ ဘယ်ဘူတာဆိုက်ဦးမလဲ ... ??? :P
Ko Alexander ကလဲ ကျနော့ကို အချွန်နဲ့ကော အတုံးနဲ့ကော မနေပြန်ပြီ။ မှားပါတယ် နာ့အကိုရယ်။ Istein ကနဂိုကမှ MZ ရဲ့ချဉ်ဖတ်ဖြစ်နေတာ အကိုကရေနံဆီ ထပ်လာလောင်းနေပြန်ပြီ။:(( အင်းလေ အကိုပြောလဲပြောစရာပဲ ကျနော်က အနေအထိုင်မှ မတတ်တာ။:71: နောက်ချင်ရင် Queen နဲ့တော့မနောက်ပါနဲ့။ ကျန်တဲ့လူတွေ ကျနော့ကိုဝိုင်းသတ်လိမ့်မယ်။ Juicy လောက်နဲ့ဆိုတော်ပါပြီ။:)) Ko Alexander က ကျနော့ထက်တောင်သတ္တိကောင်းနေပါလား။ နာမည်တောင်တင်ပြီးထုတ်ရေးရတယ်လို့။
ဟို English စာ တဗြုတ်ကြီးရေးတဲ့ အမတက်လာလို့ကတော့ အင်း Ko Alexander အတွက် မတွေးဝင့်စရာပဲ။ ဒီမှာပဲတော်လိုက်တော့မယ်။ မဟုတ်ရင် Istein spam တွေတင်နေတယ်ဖြစ်နေအုံးမယ်။
နောက်ဘယ်ဘူတာတွေ ရှိသေးလဲ ရှိရင် လက်တို့လိုက်အုံးနော်:D
(ကျနော်မပါဘူးနော် Ko Alexander ပြောတာ)
Hay Kaung lay dwe`
Don't worry I like if some guys are talking good about me I like it. So pls talk more. :P:P:P:P:71::71::71::71::71::71: I am so happy he.. he... pop naw. I can give you mcsa exam questions only because I don't know teaching nor poor in explaining something to someone. Sorry about that. Another thing is I am very busy in daily tasks.
ဟို English စာ တဗြုတ်ကြီးရေးတဲ့ အမတက်လာလို့ကတော့ အင်း Ko Alexander အတွက် မတွေးဝင့်စရာပဲ။
ရဒယ် ... Alexander က Russian လို reply ပြန်မယ်။ :P
Никакая проблема! Александр ответит с русским языком.
I would like to advise you about one thing, please don't think I am teaching you, only advice OK. Could you please try this site for writing Myanmar in Burglish. I use it too.
Istine ဘယ်ကဘယ်လိုများ ရှာတွေ့ထားတာလဲ .... :43:
EiEiygn သုံးမသုံးတော့မသိဘူး Alexander ကတော့အရမ်းကိုကြိုက်ပါသည်။
*** Istine ရေ ... အားလုံးသိသွားအောင် New Thread တင်လိုက်ပါလား။ Alexander တင်လို့ရပေမဲ့ ... Istine က Focal Person ဆိုတော့ ... ကျော်မလုပ်ချင်လို့။
ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ် mz edu က ငြိမ်နေတာကြာပီနော်
အဲဒီ site က ကိုစေတန် idea နဲ့ ဖြစ်လာတဲ့ site ဆိုတော့ MZ မှာ ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တယ်လေ။ ဒါကြောင့် Thread အသစ်မတင်တော့တာ။ ကျေးဇူးတင်ချင်ရင် ကိုစေတန်ကိုတင်လိုက်နော်။
ဒါနဲ့စကားမစပ် ဘူတာ ဘယ်နှစ်ခုထပ်တွေ့ထားသေးလဲ။ ဘော်ဘော် အချင်းချင်းနော် တွေ့ရင်လက်တို့ရမယ်နော်။:D
Istein ကဘူတာတွေရှာနေတာ ဖတ်မိလို့ ရေးလိုက်တာပါ... ဟိုအမရှိတယ်လေ..... ဘာတဲ့ ... မျက်စိညိုဆိုလား .... မျက်၀န်းညိုဆိုလား ..... Istein တော့ပျော်သွားမှာပေါ့ နောက်ဘူတာတစ်ခုတွေ့လို့ နောက်တာနော် စိတ်ဆိုးရဘူး :67:
နာ့ အတိုကြီးကလဲ Istein က တော်ထက်ထူးချွန်တဲ့ လူမျိုးမှစိတ်ဝင်စားတာနော။ Istein ကိုယ်တိုင်က ပေါပေမဲ့ (ပိုက်ပိုက်) အဲဒီလို ခပ် ပါ ချောချော မမတွေကိုတော့ ကန်တော့ပါသေးတယ်။ အတည်ပြောတာနော်။ စိတ်ဆိုးလိုက်တော့နော်။:D
MZ ထဲမှာတော့ Networking ကျွမ်းကျင်တာ မဖြူပန်းခက်တယောက်ပဲရှိလားလို့ (ကျနော်တွေ့တာ ပြောတာနော် ရှိခဲ့ရင်စိတ်မဆိုးကြေးနော်:67:)။
အိုင်းစတိုင်းရယ် အချွန်နဲ့မမပါနဲ့။ သူများကို MCSA သင်ပေးဖို့မပြောနဲ့ကိုယ်တိုင်တောင်မဖြေရသေးပါဘူး။ နောက်ပြီး cyberhack ဒီပို့စ်ကိုမြင်ရင် ရင်ထုမနာဖြစ်နေလိမ့်မယ်။
နာလား ... နာ ရင်ထုရင် မနာဘူးနော် ကလေးမ ဟီးဟီး:d
MCSAက system specializedဆို တော့စက်ပစ္စည်:ဒီလောက်မလိုပါဘူး။computer ၃ လုံး ၄ လုံးလောက်ရှိရင်ဖြစ်ပါတယ်။
(PCတစ်လုံးထဲရှိရင်တောင်မှ NIC နှစ် card နဲ့ Virtual PC or VMWare တင်ပြီးကိုစမ်းလို့ရပါတယ်)
Moreover, there're tons of Training Materials and tons of simulators
EG:~router, PIX, VLAN Switch etc...
ဒါတောင်မှ pratical အတွက်ဆိုရင် boson, packet tracer လိုဟာမျိုးတွေရှိပါတယ်
(these are simulators for several praticals such as vlan, redistribution, frame relay, static/dynamic/default routing)
For my opinion, trying for C|EH is better than trying for MCSA coz it's especially related to security
(both of the scopes of sys, net, programming etc...)